Indawo entle kakhulu enefenitshala ephakathi kwedolophu iAkwa MTN Dir Générale eneendawo zokupaka
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMarius
Yonwabela indawo yokuhlala enesitayile kunye nesembindini. ibekwe kumbindi wesithili soshishino saseDouala, le ndlu ikufutshane neDir Gle yeMTN izinyuko ezi-2 ukusuka kwi-grand boulevard de la liberté e-Akwa-Douala. Imekobume izolile kwaye ikhuselekile. Isitalato sikhanya kakuhle kwaye sigcwele isakhiwo kunye noonogada bakwaMTN 24/7. Ilungele zombini ishishini kunye nekhefu lokuhlala, eli gumbi liphezulu libandakanya: i-air conditioners, amanzi ashushu, umatshini wokuhlamba, i-generator, indawo yokupaka, i-WiFi, njl.
Isakhiwo esikumbindi wesixeko i-Akwa, sincanyathiselwe kuLawulo Jikelele lweMTN, isitrato esikhuselekileyo. kufutshane neebhanki, iiofisi, iziko lolawulo eBonandjo kunye neehotele ezinobunewunewu kunye neeresityu kwisithili seshishini saseDouala
Isithili saseDouala Akwa sisithili soshishino kunye nolawulo apho kukho ikomkhulu leenkampani zamazwe ngamazwe.
Ukongeza, izibuko elizimeleyo laseDouala linemizuzu emi-5 ukusuka kwigumbi ngemoto.
Uya kukuthanda ukuhlala kwakho kule kona inelungelo.
Kuso sonke isakhiwo uneendawo zokubhaka, iivenkile zokutyela, iivenkile ezinkulu kunye neevenkile ezahlukeneyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Marius
Thina, kunye nabaququzeleli bam, sifumaneka ngokupheleleyo ukuze sixoxe kwaye siphendule imibuzo yabahambi ngesiFrentshi, isiNgesi, isiJamani, njl. 24/24 kunye ne-7/7 nge-imeyile, i-SMS okanye ifowuni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Douala